COVID-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှုနဲ့ ပွေ့ဖက်မှုတွေကို ငြင်းမယ်ဆိုရင် ...
သင့်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ချိန်မှာ သို့မဟုတ် ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်လာမယ်ဆိုရင် သင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့စဥ့်နဲ့အမျှ အခြားလူတွေနဲ့ အချိန်တိုင်းလိုလို တွေ့ဆုံမှုတွေကနေ ဗိုင်းရပ်စ်အတော်များများနဲ့ ထိတွေ့မိလျက်သား ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။
ပုံမှန် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်မှုတစ်ခုကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အလေးထား စဥ်းစားခဲ့မိကြတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုက ဒါကို ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း မလုပ်ဖို့တားမြစ်တာ၊ ဘရားကျောင်းတွေက ဝတ်ပြုဆုတောင်းတဲ့ အစီအစဥ်တွေကို ပြောင်းလဲတာနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေပင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်တဲ့နည်းလမ်း ပြောင်းလဲကြတာတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကလည်း COVID-19 ကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပွားတဲ့ ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါအဖြစ် ကြေညာထားပါတယ်။
ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းမှာ ဘာအန္တရာယ်ရှိပါသလဲ?
တစ်ကယ်လို့ ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေသူတစ်ယောက်က လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီ လက်နဲ့အုပ်ပြီး ချောင်းဆိုးခဲ့၊ နှာချေခဲ့တယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် သူ့လက်တွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ငြိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို လူတစ်ယောက်နဲ့ သင်က လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ တစ်ရှူးစက္ကူကို ကိုင်တွယ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့လက်မှာ အခု ဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ငြိနေပါပြီ။
တစ်ကယ်လို့သာ အဲဒီလက်နဲ့ မျက်လုံး သို့မဟုတ် ပါးစပ်ကို သတိမမူဘဲ ပွတ်သပ်မိခဲ့ရင်တော့ သင်ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိသွားပါတယ်။ သင့်ကို ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့က အခြားလူတွေ သူတို့ရဲ့လက်တွေကို ဆေးကြောခြင်းအပေါ် အားကိုးအားထားပြုနေရတယ်လို့ပင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့လူတွေက သန့်စင်ခန်းကနေ ထွက်လာပြီးရင်တောင် လက်မဆေးတတ်ကြတာမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်တာကို မမေ့ပါနဲ့။ ရိုးရှင်းတဲ့အချက်က အခြားလူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်အချို့ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သူစိမ်းတစ်ယောက်က သင့်ကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ချိန်မှာ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်လာမယ်ဆိုရင် သင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ? တစ်ဘက်လူက လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ လက်ဆန့်တန်းလာပေမဲ့ သင်က လက်ကိုရုပ်ထားတာ သို့မဟုတ် ပွေ့ဖွက်နှုတ်ဆက်မယ့် သင့်သူငယ်ချင်းကို ရှောင်ဖယ်တာကတော့ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့က ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံမယ့်အန္တရာယ်နဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း လောကဝတ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိဖို့လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မလိုအပ်ဘဲ အခြား လူတွေနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါးကိုနမ်းခြင်းကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိတွေ့မှုကို လျှော့ချကြဖို့ အကြံပြုထောက်ခံထားပါတယ်။ ပြင်သစ်မှာဆိုရင် အနမ်းမချွေကြဖို့တောင် အကြုံပြုထားပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာလည်း သင်ဟာ လူတိုင်းကို သူတို့နဲ့ မထိတွေ့ဘဲ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ ယဥ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ နှုတ်ဆက်နိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - တံတောင်ဆစ်တွေတိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ လက်သီးချင်းတို့ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ "Wuhan shake" လိုမျိုး ခြေထောက်ချင်း ဖြေးဖြေးရိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ချင်း မထိတွေ့ဘဲ လက်ဝှေ့ယမ်းပြပြီး နှုတ်ဆက်စကားပြောလို့လည်း ရတာပါပဲ။
ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ အပြန်အလှန် တွေ့ဆုံဆက်ဆံမှုတွေကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြောင်းလဲစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ရောဂါကူးစက်နိုင်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မခံရအောင် ကာကွယ်ဖို့အတွက် အခြား အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ လက်တွေကို မကြာခဏ ဆေးကြောပါ။ လက်သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ဖြစ်စေ၊ ဆပ်ပြာနဲ့ရေသုံးပြီးဖြစ်စေ လက်ဆေးပါ။ လက်ဆေးခြင်းက ဗိုင်းရပ်စ်ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုပါပဲ။
ဥပေက္ခာပြုတာ၊ အရေးမစိုက်တာ မဟုတ်ပါ
အခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံးက စိုးရိမ်နေကြရတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့၊ ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ဖို့ ငြင်းဆန်တာက ဥပေက္ခာပြုတာ၊ အရေးမစိုက်တာလို့ ထင်မြင်ကြလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သဘောရိုးနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း လက်သန့်ဆေးရည် သုံးနိုင်ပါတယ်။ လက်သန့်ဆေးရည်သုံးရတာက တစ်ဘက်လူကို စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်စေမလား၊ ကသိကအောက်ဖြစ်စေမလားလို့ သင်က တွေးပူမိတယ်ဆိုရင် သူ့ကိုလည်း သင့်ရဲ့လက်သန့်ဆေးရည် အနည်းငယ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ လက်သန့်စင်ဖို့ ကူညီတာက သင့်အတွက်ပဲ အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘဲ လူမှုအရေးအရလည်း နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပါတယ်လေ။
(University of Nevada, Las Vegas မှ Assistant Professor of Epidemiology and Biostatistics ဖြစ်သူ Brian Labus ရဲ့ The Conversation ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားမှုအား ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆို တင်ဆက်ထားပါတယ်)